Ebe nchekwa dị n'èzí - N'imeKildare
Ebe nkiri dị na Kildare bụ ihe a ga-ahụ n'afọ niile. Ọ nweghị ụkọ ụzọ ị ga-esi pụta wee nyocha na mecca nke juputara na okike, yabụ gwuo ala wee hụ ihe na-akpali gị!
Ebe obibi ụfọdụ n'ime ime obodo na-agbagharị agbagharị nke Ireland, Co. Kildare bụ ebe magburu onwe ya maka ndị na-enwe mmasị ime ihe kacha mma n'èzí. Ma ị na-amasị woodland ejegharị ma ọ bụ mkpagharị n'akụkụ osimiri mara mma, enwere oke nhọrọ na Co. Kildare. Ọzọkwa, oghe mbara ala nke Curragh, na enweghị ugwu, pụtara na Co. Kildare bụ ebe magburu onwe ya maka ndị na-eje ije na ndị na-agba ígwè nke afọ niile.